जन्मियो अशोक दर्जिको भाइ, अब हिरो बनाउने योजना ! (हेर्नुहोस भिडियो) – osnepal tv
जन्मियो अशोक दर्जिको भाइ, अब हिरो बनाउने योजना ! (हेर्नुहोस भिडियो)
अशोक दर्जीको भाइ जन्मिएको छ । बुढेसकालमा जन्मिएको छोरो देखेर बुबाआमा मख्ख परेका छन । अशोक दर्जीको भाइको अनुहार दुरुस्तै अशोककै जस्तो रहेको छ । अशोकका भाइ जन्मिएपछी अशोकको घरमा खुशिको बाहार आएको अशोकका बुबाआमाले बताएका छन । जताततै चर्चामा रहेका अशोकको भाइ जन्मिएपछी अशोक पनि खुशी रहेको बुबाले बताए । काठमाडौबाट अशोक पनि सुटुक्क भाइ हेर्न आइपुगेको पनि आमाले बताइन । अशोकको भाइ जन्मिएपछी पुरै गाउँ नै अचम्ममा परेको बताए ।
अशोककी भाइरल फूपूले पनि दिनदिदै अशोकको भाइलाई स्याहार सुसार गर्दै गरेको बताइन । सुपर अनलाइन टिभीको टिम आज अशोक दर्जीको घरमा पुगेको छ । त्यहाँ अशोककी आमासंगै अशोककी फूपूपनि अशोकको भाइलाई बोकेर खेलाउदै रहिछिन । दुई महिना भैसकेको अशोकको भाइ दुरुस्तै अशोक दर्जीजस्तै रहेछ । अशोकको सानो भाइ निकै चलाख र चुलबुले रहेको र सानैमा गित सुनेर छट्पटाउदै नाच्ने गरेको सुनाउदै फुपुले अचम्म मानिन । अशोक पनि सानोमा यस्तै भएको सम्झिदै भबिस्यमा उसको भाइ पनि गायक अनि नायक पनि हुन्छ भनिन ।
फूपूले भनिन सानैमा तीखो स्वर गरेका अशोकलाई पछि गएर केही हुन्छ भन्ने लागेको थियो । अहिले अशोकका भाइको बानी देख्दा आफुहरु छक्कै परेको पनि बताइन । अशोकका बुबा बुढेसकालमा छोरो पाउँदा आफू निकै खुशी भएको अनि अशोकले पनि भाइको सारै रहर गरेको हुनाले आफुले सानो छोरो जन्माएको बताए । कस्तो छ त अशोक दर्जीको सानो भाइ जसले सानैमा गित बज्ने बित्तिकै नाच्न थाल्छ । अरु बच्चाभन्दा निकै फरक अशोक दर्जिका भाइ हेर्नुहोस तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ तलको भिडियोमा हेर्नुहोस
Previous article विश्व यात्रा गर्दै ‘भ्वाइस’का राम, सनिष, अनु र यन्की
Next article Efforts on to amend National Park Act soon: Chairman Dahal
विश्व यात्रा गर्दै ‘भ्वाइस’का राम, सनिष, अनु र यन्की